Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka socda duleedka degmada Awdheegle – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka socda duleedka degmada Awdheegle ee gobolka Sh/Hoose, kadib markii ciidamada milateriga ay weerarka qaadeen.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Sh/Hoose Maxamed Shiine ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen ciidamada milateriga, isla markaana qorshaha yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin.
“Ciidamada milateriga ayaa Awdheegle iyo hareeraheeda weerar ku qaaday, waxay ku baacsanayaan Al-Shabaab, illaa iyo hada dagaalka waa socdaa, hadafka waxa uu yahay inaan Awdheegle ka saarno, ciidamadana waa u diyaar garoobeen”ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Sh/Hoose Maxamed Shiine.
Afhayeenka ma sheegin in weerarka ay qeyb ka yihiin Ciidamada AMISOM oo dhowaan ka soo baxay deegaano ka tirsan gobolkaas.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay in shan ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dileen dagaalka, halka labo askari ciidamada dowladda kaga dhaawacmeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada milateri ay qabsadeen deegaano cusub, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin.
Al-Shabaab ayaa dhowaan la wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, oo ay isaga baxeen ciidamada dowladda iyo AMISOM, waxaana u dambeeyay deegaanka Janaale oo bishii September Al-Shabaab weerar culus ku qaadeen saldhig Ciidamada Uganda ku lahaayeen.